China Inayiloni unxantathu ongenalutho wetiye labakhiqizi nabaphakeli | JIERO-IQEMBU
Ukupakisha ikhofi, imifino, isithokelo, impuphu noma itiye leaf, njll.
Ilebula elenziwe ngokwezifiso, umklamo omusha uvumela ilebula enkomishini akufanele iwe. Inayiloni yokudla engenanambitheka futhi engenaphunga ihlangabezana nezinga lokudla kwendle lokudla kwamazwe omhlaba, kudlula izinga eliphakeme lokubonisa ukushisa kokumelana nezinto kungabona lonke itiye elihle langempela, yisikhwama setiye sephepha esijwayelekile esingaqhathaniswa naso.
1) Izindwangu zenayiloni ezinhle ezinganambitheki nezingenaphunga ezihambisana nezindinganiso zomthetho wenhlanzeko yokudla, ngaphandle kokulimala komuntu.
2) Inobuso obushelelezi kakhulu, ukungena okuqinile, izakhiwo ezizinzile zamakhemikhali nezomzimba.
3) Finyelela ukukhishwa okuphezulu kokunambitheka nokunambitheka kwetiye
4) Asikho isihlungi esidingekayo lapho kuphekwa isikhwama esingunxantathu esintathu, esilula futhi esheshayo;
I-5) Isikhwama setiye esingunxantathu esingunxantathu singavumela abathengi ukuthi bajabulele iphunga elimnandi lasekuqaleni nombala wetiye wangempela wetiye;
I-6) Isikhwama setiye esingunxantathu esingunxantathu sivumela amaqabunga wetiye ukuba aqhakaze ngokuphelele futhi amahle endaweni engunxantathu enezinhlangothi ezintathu, futhi avumela nokukhululwa okuphelele kwephunga letiyi;
7) Wasebenzise ngokugcwele amaqabunga wetiye wangempela, angabhekwa kaningi;
8) Ukufakwa uphawu kwe-Ultrasonic okungenamthungo, okwakha isithombe se-teabag. Ngenxa yokusobala kwayo, abathengi bangabona ngqo izinto zokusetshenziswa ngaphakathi ngaphandle kokukhathazeka ngokusebenzisa itiye eliphansi esikhwameni setiyi. Isikhwama setiye esingunxantathu esisebenza ngakuthathu sinethemba lemakethe ebanzi futhi siyindlela yokuthola itiye.
Olandelayo: Isikhwama setiye le-PLA Corn Fiber